Ismael El-Qudsi Maqaalkiisa Martech Zone |
Maqaallada by Ismaaciil El-Qudsi
Ismael waa agaasimaha guud ee SocialPubli.com tan iyo bilowgii la bilaabay bishii Luulyo 2015. Isaguna waa agaasimaha guud ee wakaaladda suuqgeynta internetka, Internet República, shirkadda waalidka ah ee SocialPubli.com. Ismael wuxuu wax ka dhigaa barnaamijka Master Internet Business (MIB), ESIC iyo Instituto de Empresa. Waxaa dhawaan loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah 50-ka suuq ee ugu sareeya Isbaanishka suuq geynta iyo ganacsiga
saameyn ku leh Twitter.
Khamiis, May 19, 2016 Isniin, Janaayo 18, 2021 Ismaaciil El-Qudsi
Lambarada waa kuwo cajiib ah. #Snapchat wuxuu ku faanaa in ka badan 100 milyan oo isticmaale maalinle ah iyo in ka badan 10 bilyan oo muuqaal maalinle ah, sida ku cad xogta gudaha. Shabakada bulshada waxay noqoneysaa fure muhiim ah mustaqbalka suuq geynta dijitaalka. Tan iyo markii la bilaabay 2011 shabakadani waxay si dhakhso leh ugu korodhay, gaar ahaan jiilka asalka ah ee dijitaalka ah ee isticmaala moobiilka kaliya. Waa wejiga-wejigaaga, bar-kulan warbaahineed oo bulsheed oo leh heer kaqeybgal hawlgal. Snapchat waa shabakadda